KOLIKOLY - FANODINKODINANA VOLAM-PANJAKANA : Miandry izay fotoam-pitsarana an-dRazaimamonjy Claudine ny Bianco
Raharaha anisany nafana teto amin’ny firenena ny fanodinkodinam-bolam-panjakana narahina kolikoly mihoa-pampana nataon-dramatoa Razaimamonjy Claudine 1er décembre 2017
Izay mpandraharaha goavana eto an-toerana sady mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena. Mbola mahaliana ny mpanara- baovao ihany koa anefa izay mety ho tohin’ny raharaha fa indrindra ny didy havoakan’ny fitsarana mahakasika azy.
Nahavita ny anjarany tamin’ny fanaovana ny fanadihadiana mahakasika iny raharaha iny ny teo anivon’ny birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly na ny bianco.
Nambaran’ny talen’ny bianco, Andriamifidy Jean Louis fa efa vita ny fanadihadiana nataon’izy ireo, efa mikatona tanteraka ny famotorana mahakasika iny trangana kolikoly nampidoboka azy am-ponja iny ary efa nalefa eny amin’ny fitsarana ny raharaha. Anjaran’ity farany indray no manohy ny fanadihadiana. Ny fitsarana irery ihany, hoy izy no manana ny fahefana amin’ny fanohizana ny fitazonana azy am-ponja raha toa ka ilaina amin’ny fanadihadiana izany. Nanamafy anefa ity tomponandraikitra voalohany eo anivon’ny bianco ity fa tsy ho maty momoka velively akory ny fanadihadiana nataon’izy ireo fa tsy maintsy hanaraka akaiky ny fizotry ny raharaha izy ireo ary miandry ihany koa izay fotoana hiakaran’ity mpanolo-tsaina manokan’ny filoha ity eo anatrehan’ny fitsarana. “Mbola mandeha ny famotorana ary tsy maintsy ho tonga ny fotoana hitsarana azy. Aza mieritreritra ianareo hoe any iny dia tsy ho hita intsony izay hiafarany, fa izahay eo amin’ny bianco ihany koa dia manara-maso ny fizotry ny raharaha izay aterinay any”, hoy hatrany ny fanazavana nomen’ny talen’ny Bianco.
Fantatra fa tsy ho ela dia ho tafatsangana ilay rafi-pitsarana mahaleo tena ho an’ny trangana kolikoly. Manoloana izany indrindra dia nanamafy ny talen’ny bianco fa rehefa tafatsangana soamatsara ity farany dia hifindra ao anatin’io rantsana io indray ny antontan-taratasy rehetra mahakasika an-dramatoa Claudine ary ao amin’izay no ahitana izay mety ho tohiny. Ankoatr’ity raharaha mbola ijanonan’ity mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena any am-ponja ity dia voalaza fa mbola dosie hafa no mahavoarohirohy azy saingy hatreto dia mbola mijanona ho tsiambaratelon’ny bianco ny fanaovana ny fanadihadiana mahakasika izany.
“Marina fa mbola misy raharaha hafa mety mahavoarohirohy azy fa io tsy azo ambara aminareo, hoe inona ilay raharaha fa mbola eo am-panaovana famotorana izahay ary rehefa vita ny famotorana dia tsy maintsy alefa eny amin’ny fitsarana ny vokatry ny fanadihadiana”, hoy i Andriamifidy Jean Louis talen’ny bianco raha nitafa tamin’ny mpanao gazety.